[RELOADED] Daim Kata UMNO BN Hanya Menang3Negeri Dalam PRU Akan Datang
ရခိုင်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့ တွင် ကြေငြာရန်-ရခိုင် အကြမ်းဖက် သမားများကို လက်နှက်များနှင့် အတူဖမ်းဆီးမိခြင်း
Gambar Menarik Hari Ini - Isu Debat
Nasha Sengaja Cari Pasal Supaya Dipecat Dari PAS
စစ်အစိုးရ ဘယ်လိုထိန်းပြီး လွှတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလွှတ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ
Anti-Islam Anti-Muslim monks
Pemandu Teksi Desak Syed Hamid Albar Letak Jawatan Dari SPAD
Terbukti SPRM Alat UMNO BN, Tutup Skandal RM40 juta UMNO Sabah
Monks Protest at Bangladesh Embassy (for not treating Buddhists there like Myanmar Government’s treating on its Muslims?)
Posted: 13 Oct 2012 10:35 AM PDT
Bekas Bendahari Umno, Tun Daim Zainuddin meramalkan Umno BN hanya menang di Johor, Melaka dan Pahang pada Pilihan Raya Umum (PRU) akan datang dengan selainnya dimenangi Pakatan Rakyat.
Daim berkata demikian dalam wawancara eksklusif bersama akhbar harian Cina, Nanyang Siang Pau yang diterbitkan awal tahun ini, seperti dilaporkan Malaysiakini.
Ramalan Daim di atas boleh jadi kenyataan JIKA tiada unsur penipuan dari SPR.
Berdoalah kepada Allah swt agar Dia mendedahkan dan menggagalkan segala tipu daya yang dilakukan SPR di dalam PRU akan datang ini.
Posted: 13 Oct 2012 05:23 AM PDT
Source:ကျောက်တော်မြို့တွင် ရခိုင် အကြမ်းဖက် သမားများကို လက်နှက်များနှင့် အတူဖမ်းဆီးမိခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ တွင်လှုပ်ရှားနေသော ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ(ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်) ၁၇ဦးကို လက်နှက်မျိုးစုံ ၁၈လက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် မွတ်စလင်ရွာ (၅)ရွာ၊ အိမ်ခြေ (၆၀၀)ကို ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများက မီးရှို့ခဲ့ရာ လူဦးရေ (၅၀၀၀)ကျော်အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မွတ်စလင်(၂၀)ဦး အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၄င်းအနက်၂ဦးမှာ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းတွင် ရမလ(ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး) အဖွဲ့ ဝင်များက လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ပြီး မွတ်စလင်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်။ လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ နှင့် ရမလ တို့နားလည်မှု ယူပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ကြံခြင်းဖြစ်သည်။ RNDP ပါတီက ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများကို သူတို့ ရေးဆွဲထားသော မဟာဗျူဟာအတိုင်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့သည်။
မွတ်စလင်များက မိမိအိမ်ကို မိမိ မီးရှို့ခဲ့ သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ဆန်စက်ကို မီးရှို့ခဲ့သည်ဟုလည်းကောင်း မမှန်သတင်းများကို စစ်တွေမြို့ တွင် RNDP ပြည်နယ်အဖွဲ့ ဝင် ဦးအောင်မြတ်ကျော် မှထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးရှိ မွတ်စလင်ကျေးရွာများကို မီးရှို့ပြီးလူများကို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အဖြစ် ရောက်အောင် စီမံနေကြသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် မွတ်စလင်များကို အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ပြီး ဗလီများနှင့် အိုးအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့စဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်များ ဖြစ်သော ဦးကာလူရှင်နှင့် ဦးအောင်မြတ်ကျော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ညွှန်ကြားမှု ပေးခဲ့သည့် ခိုင်မာသော အထောက်အထားများရှိသည်။ ၁၉၆၈ခုနှစ် စစ်တွေမြို့တွင် ဆန်ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်က ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် မွတ်စလင်များစွာ အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ စစ်တွေမြို့ရှိ ဆတ်ရိုးကျ ချောင်းမှာ သွေးချင်းချင်းနီခဲ့သည်။
၄င်းဖြစ်ရပ်ကို အကြောင်းပြု၍ "14 August Never Forget" ဟူ၍ ရခိုင်လူမျိုးများအကြား မပျောက်ပျက်နိုင်သော နာကျည်းဖွယ်ရာ သမိုင်းဖြစ်ရပ် တခုအဖြစ်ရှိနေသည်။ ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းကာလတွင် မွတ်စလင်အိမ်များ၊ ဗလီများကို ဖျက်ဆီး မြေလှန်ပြစ်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် လှမောင်တင် ကိုယ်တိုင် မြေတူးစက်များ၊ မီးသတ်ကားများကို စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဦးလှမောင်တင်မှာ သူတော်ကောင်း အယောင်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။ အမှန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်း၏ အဓိကမဟာဗျူဟာကို RNDP ပါတီနှင့် ရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ သော မဟာဗျူဟာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင်များကို လူမျိုးတုန်း (genocide) သုတ်သင် သတ်ဖြတ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်လူမျိုးများ၏ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့ တွင် ကြေငြာရန်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကိုရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း လျာထားကြောင်းသိရှိရသည်။ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှာ ငသိုင်းချောင်းမှ စစ်တကောင်းအထိ ဖြစ်သည်။
ဦးကျော်မောင် ဗိုလ်မှူး(ငြိမ်း) သမ္မတ
ဦးအေးမောင် လွှတ်တော် အမတ်၊ ဝန်ကြီးချုပ်
ဦးအေးသာအောင် ရခိုင် NLD နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
ဦးလှမောင်တင် ရခိုင် ဝန်ကြီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဦးထွန်းရွှေခိုင် မော်ကွန်းထိန်း(ငြိမ်း) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး
ဦးဘရွှေ ပညာရေး ( ဒုဝန်ကြီး) ပညာရေးဝန်ကြီး
ဦးလှမြင့်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် eleven journal ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး
ဦးဦးလှစော အတွင်းရေမှူး (RNDP) လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး
ဒေါ်စောခင်တင့်ရခိုင်သဟာရ အသင်း လူမှုရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီး
ဦးမြအောင် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး
ဦးမင်းကြည် ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး
ဦးကျော်ဇံလှ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး
ဦးကာလူရှေ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဦးဇော်အေးမောင် ရန်ကုန်တိုင်း ရခိုင်မျိုးနွယ်စု ဝန်ကြီး အားကစားနှင့် ကာယပညာ
ဦးစံရွှေမောင် ပြည်နယ်ဥပဒေ အရာရှိ တရားသူကြီးချုပ်
ဦးအောင်မြတ်ကျော် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး
Posted: 13 Oct 2012 08:03 AM PDT
Sehingga hari ini Najib masih takut untuk berdebat. Bukan budaya kita katanya.
Yang aneh walaupun dikatanya bukan budaya kita tetapi beliau hadir menyampaikan piala dan hadia untuk Pertandingan Debat Piala Perdana Menteri dua hari lepas.
Penakut atau hipokrit? Atau kedua-duanya sekali?
Posted: 13 Oct 2012 04:03 AM PDT
Nik Aziz sifatkan Nasha 'lidah panjang'
KOTA BHARU - Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat menyifatkan bekas Timbalan Presiden Pas, Nasharudin Mat Isa, yang Selasa lalu memberi peringatan agar tidak mengejar kuasa semata-mata, sebagai pemimpin 'lidah panjang' ekoran pendirian kebelakangan ini yang tidak selari dengan parti.
"(Rancangan perpaduan) itu mengarut, mengapa sekarang baru timbul, dia (Nasharudin) itu calon Pas di Bachok, sikap itu seperti 'lidah panjang'," kata beliau ketika ditemui selepas Majlis Hari Keluarga Mawaddah di Pengkalan Chepa di sini hari ini. -SH
Nasha mahu dipecat PAS kerana tidak berani langgar 'Bai'ah'
KUALA LUMPUR, 13 Okt — Tindakan Nasharuddin Mat Isa memprovokasi hubungan diantara PAS dan DAP sejak akhir-akhir ini dalam isu Hudud dan negara Islam dipercayai mahu dipecat daripada parti tersebut kerana tidak berani melanggar "Bai'ah" dengan meninggalkan PAS secara sukarela.
"Jika kita lihat, semenjak dua menjak ni, Nasha agresif melaga-lagakan PAS dan DAP supaya Pakatan Rakyat (PR) berpecah," kata seorang pemimpin tertinggi PAS kepada The Malaysian Insider.
"Beliau lakukan semua ini dengan tujuan agar PAS memecat beliau dan bukannya beliau meninggalkan PAS.
"Meninggalkan PAS bererti melanggar sumpah 'Bai'ah' dan ini mungkin menjadi sebab besar mengapa beliau tidak tinggalkan PAS secara sukarela.
" "Bai'ah" bermaksud sumpah untuk taat kepada perjuangan Islam yang kebiasaan diamalkan oleh gerakan Islam.
Jika melanggar Bai'ah, dipercayai balasan daripada Allah akan menimpa seseorang itu.
Nasharuddin merupakan bekas timbalan presiden PAS yang gagal mempertahankan jawatannya selepas tewas ditangan Mohamad Sabu dalam Muktamar Agung PAS pada tahun 2011 dalam pertarungan tiga penjuru diantara dirinya, Mohamad dan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man.
Menurut Prof Datuk Mohamad Abu Bakar, apa sahaja yang berlaku kepada Nasharuddin tidak akan memberikan impak yang besar kepada PAS dari sokongan.
"Pada saya, apa yang dilakukan oleh Nasha ini lebih kepada mengukuhkan orang Umno yang sudah Umno," kata penganalisis politik daripada Universiti Malaya (UM) itu apabila dihubungi oleh The Malaysian Insider.
Prof Mohamad juga menambah, jika Nasha meninggalkan PAS dan menyertai Umno sekalipun, beliau hanya akan mengulangi nasib pemimpin PAS terdahulu yang menyertai Umno seperti Datuk Mohd Asri Muda (bekas presiden) dan Nakhaie Ahmad (timbalan presiden).
"Jika Nasha menyertai Umno, beliau tidak akan mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada parti tersebut kerana semua sudah tahu hati dan sanubarinya bersama PAS," katanya sambil menjadikan Datuk Dr Hasan Ali sebagai contoh terkini.
Dr Hasan walaupun telah meninggalkan PAS tidak disambut menyertai Umno sebaliknya terpaksa menubuhkan badan bukan kerajaan (NGO) Jalur Tiga (Jati) yang memperjuangkan Islam, Melayu dan Raja.
Naib Presiden PAS, Datuk Husam Musa mempersoalkan tentang keikhlasan Nasharuddin dalam memperjuangkan agenda Hudud seperti yang dilakukan kebelakangan ini.
"Dulu masa nak yakinkan PAS menyertai Umno tubuhkan kerajaan perpaduan, Ustaz Nasa (Nasharuddin) beritahu PAS, Pak Lah (Tun Abdullah Ahmad Badawi) nak beri tiga kerusi menteri jika PAS bersetuju bersama Umno.
"Saya nak tanya dia, masa Pak Lah tawar tiga kerusi menteri tu, ada tak beliau dibincangkan sekali tentang pelaksanaan hukum Hudud?" kata beliau melalui perbualan telefon bersama The Malaysian Insider beberapa hari lalu.
Tambah Husam lagi dengan sinis, jika Umno benar-benar ikhlas mahu bermuzakarah dengan PAS, Nasharuddin harus diberikan laluan untuk menang tanpa bertanding di kerusi parlimen Bachok pada pilihan raya ke 13 nanti.
"Kita nak tengok Umno letak atau tidak calon di Bachok nanti," katanya.
Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Samad di parlimen beberapa hari lalu menegaskan kenyataan-kenyataan Nasha seolah-olah mempunyai agenda politik tertentu yang menguntungkan Barisan Nasional (BN) dan cuba mewujudkan ketegangan dalam PR.
"Kebelakangan ini hubungan beliau (Nasha) dengan PAS tidak serapat berbanding hubungannya dengan kerajaan (Barisan Nasional) BN.
"Kenyataan dikeluarkan jelas bertujuan untuk menguntungkan BN dan wujudkan ketegangan antara parti PR walaupun dikeluarkan tanpa bukti," kata Khalid kepada pemberita di lobi Parlimen.
Kenyataan terbaru dikeluarkan Nasha adalah DAP cuba menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian dengan mendakwa parti komponen PR itu pernah menganjurkan majlis dan berdoa memohon negara dijadikan sebagai negara Kristian selepas DAP memenangi 12 kerusi di Sarawak tahun lalu.
Khalid turut menegaskan, perkara itu tidak pernah dibangkitkan Nasha dalam pertemuan dengan Majlis Syura Ulama sebelum ini.
Prof Mohamad bersetuju dengan kenyataan Khalid itu dengan mengatakan menjelang pilihan raya ke 13 yang semakin hampir ini, strategi Umno adalah untuk mewujudkan konflik dalam PR.
"Apabila parti dalam PR berlaga sepertimana perselisihan PAS dan DAP dalam isu Hudud, Umno dan BN yang untung.
"PR akan dilihat tidak bersatu jika terus bergaduh sesama sendiri dan inilah yang dimahukan Umno," katanya lagi.
Posted: 13 Oct 2012 01:30 AM PDT
Currently, I spend loads of my free time reading as much as I can on economic, health and technological issues. I am no economics/financial guru but I seriously believe that the world is heading towards economic collapse.
Many already know I have no intention to blog or comment on our local political scene any more because I regard it asatotal waste of time. Why? We can see some running the same worn-out plots, singing the same out-of-tune melodies, introducing the same bogeymen and spinning the same old yarn. And yet, there is absolutely no progress because all they want is to cling on to power or to wrest power in the name of the rakyat's well being. Helloooooooooo!!! Who are they kidding? Time to get out of that delusional ambience. A cursory glance at the headlines of each day can tell us how shallow and selfish are some or worse still, how deceptive can some 'angels' be. Many are still caught up with ideological aspirations, or being fooled by spin doctors who gleefully lead the herd astray with their so-called theories. While they are fighting amongst themselves, the worldwide situation is worsening and we DO NOT see aspiring leaders telling us HOW they will save us all from the worst case scenario. Moving on....There are MORE important things that concern us! Simply put, is the end at hand? We have to be aware of the signs around us.
This site gives fourteen signs that the world economy is getting weaker.
Here'sasummarised form of the 14 signs. Please click here to read the post in full. There are already 120 comments so far.
#1 Things in China do not look good right now.
#3 In Spain, violent demonstrations over the state of the Spanish economy just outside the national Parliament building in Madrid on Tuesday evening made headlines all over the globe.
#6 The economic protests in Greece are getting completely and totally out of control.
#8 The number of unemployed workers in Italy has increased by more than 37 percent over the past year.
Reader YK also sent me an article about Lindsey's Four Signs of Economic Collapse. I am not posting it here because it is too long and too er... *coughs* to do so.
CLICK HERE to access articles on economic collapse in The Examiner. You might want to check out the latest articles in The Examiner on:
Silver and gold: Why invest in them and which is the better acquisition?
The USA-China economic weapons of mass destruction
Peter Schiff says the government's cure is worse than the disease.
Look around you. I feel it. What? The increase in the prices of goods, especially food! Some of my friends overseas have already started growing their own vegetables and fruits.
There will comeatime when the prices of food will rocket sky high and many will suffer. Self-reliance is the best. Most importantly, we need to (I have not yet...) ensure we have ample supplies such as...
water, water filters (more than one), water containers, water purification pills
water purifiers (small ones) such as what you can see HERE
dried beans of any type
Mixed stuff eg those that hikers bring along such asavariety of ingredients, raisins, peanuts and other nuts, dried fruit and berries and chocolate. :-)
Lighters, tinder packed in waterproof containers, Candles
Solar power generator, solar powered batteries for home use and even for cell phones
Cell phone/Laptop Signal Boosting Kits
Propane and propane stove
Some of you might think I have lost my marbles. By now, you can understand why I do not comment on local issues. The current problems that we see in our own back yard is nothing compared to what lies before all of us, all over the world.
In closing, allow me to share with you with Bill Ryan wrote HERE:
I'm as certain as I can be that in the next 6-9 months quitealot is going to happen that may require us to get our life jackets on (routine and sensible when ocean sailing), work together well, and safeguard our energy, resources and well-being until the storm is over.
Like sailing at sea, storms are not to be feared -- just to be handled. If one wanted to avoid storms, one should not be at sea at all. Here we are all on this planet this lifetime, and it wasn'tamistake. You chose to be here. You haveamission to accomplish.
If you haveagood boat andagood crew, then it's simply an adventure ... and, asaspin-off,atest and learning experience for everyone.
It can beagreat deal of fun. Nothing trivial is intended by that statement. As spiritual beings, we're all fun-loving dolphins swimming in the universal sea... and sometimes we find ourselves trapped in nets which we have to get out of. That's part of the adventure, too.
The only real problem is remembering your mission. Not easy with Jason-Bourne-amnesia. Look for clues all around you: people you know, people you meet, the things that "happen to you", the coincidences and synchronicities, and what energizes you and keeps capturing your attention.
In 1979, I formed this Christian singing group called The Living Harmony with Rev. Koe Choon Huan (PJ) ,Rev. Michelle Lee (La, Paz, Bolivia), Rev Moses Lee (currently on sabbatical in US), Anthony Khor (Perth), Hock Guan (Singapore), Sook Cheng (???) and myself. Then, we wonastate level Talentime with our cover version of Larry Norman's "I Wish We'd All Been Ready". Asagroup, we arranged the seven-part harmony with overlapping parts for the song and used Cliff Richard's version which you can view HERE (FOR NON-MUSLIMS ONLY).
I am notareligious fanatic and you can see that in all my blog posts, I have never quite proclaimed my faith at all. For the record, I am not trying to convert anyone in this post which I am writing to raise awareness that there are MORE IMPORTANT and worrying issues that concern all of us than the current situation in our own backyard. In my entire life, I have never shoved the gospel down anybody's throats. In fact, I rarely share the gospel openly and have done so to only less than ten persons because I believe religion isavery personal affair and it is every one's right to decide on their own which faith they want to believe. Five of them converted - including my dad, my god-daughter now finishing her PhD in US, her cousin and my varsity course-mate - Cindy Ooi - who is currently an interim pastor At this point of time, I believe the end is within my lifetime. And it is ironical that the song I sang in 1979, isaquestion that I have to ask myself.
Frankly, no. To other Christians out there reading this, are you ready? To those from other faiths, if indeed the end is near, are you ready?
Honestly, I have no answer. I am takingabig risk blogging about this but I just hope that in time to come, we can really take time to smell the roses, to see the world as it is, to have the right values, beliefs and perspectives so that we are not hoodwinked into forgetting what is important. Beliefs, perspectives and values or even priorities may differ but one thing we have in common is the fact that our lives are precious, so are our family members and loved ones. So, cherish them always and make the right decisions...may the God you believe in bless and guide you always.
Posted: 13 Oct 2012 12:46 AM PDT
My friends said>>>
၁။ တွေးမိတာလေး တစ်ခု မျှဝေချင်တယ်။
" ဒီကောင်တွေကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေ စိတ်ဆင်းရဲရတာမှန်တယ် ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ ဒိကောင်တွေ ရှုံးပြိးရင်းရှုံးရင်းပဲ သိက္ခာလဲ ကျပြိးရင်ကျပဲ " ကျနော်လည်း အဲဒီအတိုင်းတွေးမိတယ်။ နိုင်ငံရေးဘက်ကို နဲနဲ လေး ထပ်တိုး စဉ်းစားမိတော့ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာဖို့ အကြီးအကျယ်ကြိုးစားနေတယ် ၀င်လာမယ် စီးပွားေ၇းသမား အတတ်ပညာရှင်တွေဟာ လူမျိုးစုံဖြစ်တယ် မွတ်စလင်တွေ အများကြီး ပါလာနိုင်တယ် ။ ( ရေနံကုမ်ပဏီတွေမှာ ဆိုရင် အမေရိကန် ဥရောပ ပိုင် ဖြစ်ပါစေ ၀န်ထမ်းအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအများကြီှးရှိတယ် ) ဒါတွေဟာ မလွဲမရှောင်သာ ကြုံတွေ့ရမယ် ကိစ္စဖြစ်တယ်။
၂။ ဒီလို နိုင်ငံတကာ နဲ့ ဆက်ဆံရမယ့် အရေးကို မြန်မာအစိုးရလည်းသိတယ် ။ ဘာကြောင့် ဒီလို လူနည်းစု ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဆိုင်းဘုဒ်တွေ ကိုင်ပြီး ဆူပူအော်ဟစ်နေတာကို ခွင့်ပြုထားတာလဲ?
အစိုးရရဲ့ နောက်ကွယ်က PLAN AND MOTIVE ကဘာလဲ။
၃။ လက်ရှိ သိန်စိန်အစိုးရမှာကော အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ အပြည့်အ၀ ရှိရဲ့လား။
ကျနော်တို့ အားလုံး စစ်အစိုးရလက်ထွက်တွေဆိုတော့ စစ်အစိုးရ ဘယ်လိုထိန်းပြီး လွှတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလွှတ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။
၄။ ရခိုင်ပါတီ အရမ်းစွမ်းတယ်ဆိုတာ ကျနော်တော့ သိပ်မယုံချင်ဘူး။ တကယ်တော့ စစ်အစိုးရ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ( လက်ရှိ သိန်းစိန်အစိုးရဘဲဖြစ်ဖြစ် ) RNDP ကို ကိုင်ချင်ရင်အလွယ်လေးပါ။
ရခိုင်ထက် များစွာ အင်အားတောင့်တယ့် ကရင် ၊ ရှမ်း၊ မွန် စသည်ကိုတောင် ဘယ်လို ဖြိုခဲ့လည်းဆိုတာ အားလုံးသမိုင်းသက်သေရှိပါတယ်။
၅။ကောင်းပြီး သိန်းစိန်အပါအ၀င် ၊ NLD ၊ ၈၈ လူတော်တော်များ မွတ်စလင်ကို အတွင်းဓါတ်ခံမုန်းတာက ကျနော်တို့ အတွက် သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး ၊ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ၊ သူတို့ စည်းပူးခဲ့တယ့် ပညာရပ် ၊ သူတို့ ဘုရားထူးနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ….. မည်သူကမှ – DIVERSITY (လူမျိုးဘာသာ ယုံကြည်ချက်မတူသူများ အေးချမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်ရေး ) ၊ ဂျီနီဗာ ကော်ဗင်းရှင်းကပြဆိုထားတဲ့ လူအခွင့်အေ၇း စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို မသင်ပေးလိုက်ဘူးလေ …. ။
၆။ ကျနော်အတွက် ပဟေရိ ဖြစ်နေတာက လက်ရှိအစိုးရနဲ့ နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူတွေ မွတ်စလင်ကို ဓါးစာခံလုပ်ထားတဲ့ အရေးအခင်းကနေ သူတို့ လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကဘာလဲ ?????
ကျနော့ အမြင်တော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ရဲ့ တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်လစီကို ရခိုင်တွေ နင်းပြီး ဒီပွဲကို ကစားသွားတာလို့ မြင်တယ်။
ရခိုင်တွေ အင်အားကို လျော့တွက်လို့မရဘူး။ သူတို့ အင်အားက တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မတူဘူး။ ပညာတတ်များတယ်။ နယ်စုံမှာ ရခိုင်တွေ မြှုပ်ထားတယ်။
အခု လုပ်သွားတဲ့ပွဲမှာ လွှတ်တော်၊ မီဒီယာ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ၊ ရခိုင်အများအပြားပါတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရခိုင် ဘုန်းကြီးတွေ အားလုံး တကွက်ခြင်းဆီ ကစားသွားကြတာ။
လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်တွေအားကောင်းတာကို သမ္မတဆီက ရခိုင်အရေးတင်တဲ့စာတမ်း ဖတ်တဲ့ကိစ္စတောင် နောက်ဆုတ်သွားတာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။
အုပ်ချူပ်ရေးပိုင်းမှာ သမ္မတနဲ့ အစေးမကပ်တဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ချင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ တချို့ ဒီကိစ္စမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားတယ်လို့ ထင်တယ်။
လွှတ်တော်မှာလဲ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ အားပြိုင်နေတာ ခုံရုံးကိစ္စကို ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။
ရခိုင်တွေက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သဘောတူညီမှုတည်ဆောက်ထားပုံရတယ်။
တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ခရစ်ယာန်ဖြစ်တော့ ၈၂ ဥပဒေကို ပြင်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ် လွှတ်တော်မှာ ဒီကိစ္စအသံကျယ်ကျယ်မထွက်လာတာ တော်တော်ကို စဉ်းစားစရာပါ။
အစိုးရပိုင်း (ကြံဖွတ်)ပါတီက ၂၀၀၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွတ်စလင်မ် နယ်မြေက လွဲပြိးကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရခိုင်မှာ အနိုင်မရဘူး။
အခုလဲ ရခိုင် ကြံဖွတ်တာဝန်ခံ မောင်ဦး (အရင် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး) သွားတာတောင် အဆဲခံရတယ်ကြားတယ်။
ဒီမိုကရေစီအသံထွက်ရင် နောက်ပိုင်း ရခိုင်မှာရော တနိုင်ငံလုံးမှာ မွတ်စလင်မ်ကိုနေရာပေးကိုပေးရတောမယ် (လွှတ်တော်)
အထူးသဖြင့် ရခိုင်တွေ ဒါကို လုံးဝမလိုချင်လို့ ဒီ ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted: 13 Oct 2012 12:42 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC (အစ္စလာမ္မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ) ရုံးခန်းလာရောက်ဖွင့်လှစ်မည်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့မှ သံဃာတော်များက အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မွန်းလွဲတစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်က စီတန်း လှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် ထောင်ဂဏန်းရှိသော သံဃာတော်များသည် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဦးပွားဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းမှစတင်၍ စီတန်းထွက်ခွာခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းခွဲမှတစ်ဆင့် စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ၈၄ လမ်း၊ ၄၂ လမ်း၊ ၇၈ လမ်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမှ ဦးပွားဘုရားဝင်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ ညနေသုံးနာရီခွဲအချိန်တွင် လေးပြင်လေးရပ်ရှိ မိမိတို့၏ကျောင်းတိုက် များအသီးသီးသို့ ပြန်ကြွခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted: 13 Oct 2012 12:51 AM PDT
Badan Bertindak Pemandu-pemandu Teksi Bermeter (BBPTB) mendakwa Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) gagal berfungsi menjalankan tanggungjawab meningkatkan mutu perkhidmatan teksi dan menggesa pengerusinya, Tan Sri Syed Hamid Albar meletak jawatan.
BBPTB menggariskan lima faktor kegagalan SPAD yang menyebabkan kemarahan pemandu teksi tidak dapat lagi dibendung dalam kenyataan oleh pengerusinya, Amran Jan kepada The Malaysian Insider.
Perkara tersebut ialah gagal mengiktiraf mahupun melantik wakil pemandu teksi di dalam jawatankuasanya, gagal memansuhkan sistem kupon, gagal mengeluarkan permit khas kepada Duta Kecil Pelancongan seperti yang diminta sendiri oleh Menteri Pelancongan, Datuk Seri Dr Ng Yen Yen, gagal menangani kemelut perkhidmatan teksi yang berlarutan sejak berpuluh tahun dan gagal melaksanakan langkah satu warna untuk teksi bermeter walaupun cadangan itu sudah lama diutarakan.
"Kelima-lima kegagalan ini jelas membuktikan SPAD adalah sebuah badan yang gagal.
"Syed Hamid perlu meletak jawatan kerana gagal melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya," kata Amran.
Dalam laporan The Malaysian Insider semalam, Amran juga menyelar kenyataan presiden Persatuan Pengusaha Teksi dan Kereta Sewa Kuala Lumpur, Selangor (Perpekli), Datuk Aslah Abdullah yang menyokong perkhidmatan percuma bas Go-KL.
Sikap dan kecenderungan Aslah yang sering memihak kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dan gagal membela kebajikan pemandu teksi menyebabkan kredibilitinya dipertikaikan rata-rata pemandu teksi.
Amran juga memberi amaran kepada SPAD untuk mengambil serius perkara ini sambil mengugut untuk menggunakan "media" terbesar di ibu kota itu untuk memberikan imej buruk kepada kerajaan.
"SPAD dan kerajaan perlu ingat, pemandu teksi adalah "media" terbesar di ibu kota.
Kalau mereka abaikan, tanggunglah akibatnya nanti.
"Kami boleh sampaikan perkara buruk dan baik mengenai kerajaan," tambah Amran lagi.
Pada Selasa minggu lalu, 250 pemandu teksi bertindak mengadakan piket di Jalan Bukit Bintang ekoran tidak puas hati dengan perkhidmatan bas percuma Go KL yang didakwa menyebabkan kemerosotan pendapatan sehingga 70 peratus.
Himpunan secara aman itu bermula kira-kira jam2petang hingga 7.30 malam membabitkan sekitar kawasan pusat beli-belah Pavillion hingga ke Lot 10.
Perbuatan pemandu terbabit yang kebanyakannya ahli Persatuan Pemandu Teksi Bestari Kuala Lumpur menyebabkan kawasan di sekitar Bukit Bintang sesak teruk apabila laluan digunakan untuk melakukan bantahan itu terpaksa ditutup.
Berdasarkan laporan polis yang dibuat persatuan itu kelmarin, perhimpunan juga dibuat sebagai bantahan terhadap masalah ulat teksi "Arab" dan perkhidmatan teksi sapu serta beberapa tindakan SPAD yang mereka anggap menekan pemandu-pemandu teksi berlesen.
Posted: 12 Oct 2012 10:00 PM PDT
Posted: 12 Oct 2012 10:26 PM PDT
BN ingat rakyat senang ditipu kes RM40 juta?
Kuala Lumpur: "Adakah SPRM telah membuat siasatan penuh termasuk mengambil kenyataan Datuk Seri Musa?" tanya Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng.
Semalam, katanya kerajaan BN bangga mengumumkan pembebasan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman daripada skandal wang tunai S$16 juta (RM40 juta) ekoran tindakan SPRM untuk menggugurkannya daripada dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram.
Menurutnya, mengikut jawapan bertulis Parlimen Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz, Pejabat Ketua Peguam Negara tidak menjumpai apa-apa elemen rasuah dalam kes seorang ahli peniagaan Sabah yang ditahan di Hong Kong kerana menyeludup wang berjumlah RM40 juta dalam mata wang Singapura.
Katanya, Nazri berkata bahawa siasatan menunjukkan duit itu sebenarnya merupakan sumbangan politik kepada Umno Sabah dan bukan kepada Musa.
"Adakah BN ingat bahawa rakyat Malaysia senang tertipu dengan cerita sebegini dan menerima bahawa tidak ada masalah kerana duit yang diseludup itu adalah untuk Umno Sabah dan bukan untuk Musa?" soalnya dalam satu kenyataan.
Tanya beliau lagi, apakah syarat-syarat di sebalik sumbangan RM40 juta itu dan kenapakah ia dilakukan dengan mata wang Singapura.
Bagi Ahli Parlimen Bagan itu, sekali lagi SPRM cuba untuk menutup skandal politik wang oleh BN.
"Skandal penyeludupan RM40 juta wang tunai ini menyusul selepas dua lagi skandal yang melibatkan dua orang lagi ketua menteri BN," katanya.
Baru-baru ini, ujarnya sebuah NGO Switzerland telah mendakwa bahawa kekayaan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Taib Mahmud dianggarkan mencecah RM46 bilion, lantas menobatkannya sebagai orang terkaya di Malaysia.
"Lepas itu, kita berhadapan dengan majlis kenduri kahwin anak Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ali Rustam, di mana 130,000 orang tetamu telah dijamu dalam sambutan yang memecah rekod.
Sehingga hari ini, ujarnya Ali Rustam masih lagi gagal menjelaskan bagaimana beliau mampu menanggung kenduri yang begitu mewah yang mendakwa kosnya hanya RM600,000 dan mendapat tajaan.
Justeru, kata Lim, rakyat Malaysia sudah tidak boleh tahan dengan keangkuhan pemimpin-pemimpin BN yang bukan sahaja mengaut kekayaan yang luar biasa tetapi juga menonjolkannya di khalayak umum. -HD
Umno terlibat seludup wang ke Hong Kong. Petaling Jaya: Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz mengakui wujudnya wang sebanyak RM40 juta milik seorang ahli perniagaan yang diseludup melalui Hong Kong adalah untuk sumbangan kepada Umno Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengenai hal ehwal undang-undang itu mengaku berlakunya kejadian ini di Dewan Rakyat semalam, demikian menurut Ketua Penyelaras Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) Kebangsaan, Badrul Hisham Shaharin. Badrul Hisham @ CheguBard berkata, seorang ahli pernigaan bernama Micheal Chia telah ditahan Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong pada 14 Ogos 2008 dengan matawang Singapura berjumlah RM40 juta di dalam bagasinya sebelum menaiki pesawat menghala ke Kuala Lumpur. "Namun berita ini diselindung sebaik mungkin dan tidak mendapat liputan dari media tempatan," katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Menurut beliau, terbaru semalam apabila hal ini dibangkitkan semula oleh Ahli Parlimen Batu Tian Chua ekoran jawapan bertulis yang diperolehinya dari Menteri terbabit yang mengatakan ia bukan wang untuk Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman tetapi untuk Umno Sabah. Bankrap negara"Apa yang harus disedari ialah mungkin dalam keghairahan regim pertahan pemimpin mereka maka mereka tidak sedar secara tidak langsung diakui bahawa penyeludupan wang RM40 juta itu memang wujud. Makanya apa tindakan undang-undang terhadap kejadian yang diakui wujud itu? CheguBard yang juga Ketua PKR Cabang Rembau menegaskan, untuk membela Musa, Nazri mengakui wang itu bukan untuk Musa secara peribadi tetapi untuk Musa selaku Ketua Umno Sabah maka ini bermakna sahlah Umno Sabah terlibat dalam penyeludupan wang. Kata beliau, menurut satu sumber, wang tersebut ada kaitan dengan kawasan balak yang diluluskan di Sabah dan adalah amalan biasa sebahagian keuntungan harus dipulangkan sebagai dana politik untuk komponen Barisan Nasional (BN) atau terus kepada pemimpin tertentu. "Bukan sedikit wang negara diseludup keluar berkaitan kepentingan pemimpin BN," jelas CheguBard. Contoh katanya sebelum ini terbongkar bagaimana Menteri Besar Negeri Sembilan Mohamad Hasan dikaitkan dengan penyeludupan wang RM10 juta ke London dan setelah didapati sahih berlaku, hanya syarikat penghantaran yang dihukum dengan lesennya ditarik. "Inilah pengkhianat sebenar menjejaskan ekonomi negara. Sudahlah terlibat merompak wang rakyat terlibat pula melarikan wang keluar negara. "Yakinlah jika regim ini terus berkuasa pasti tidak akan ada antara mereka yang diambil tindakan, lebih penting kegiatan mereka ini akan pasti membankrapkan negara," ujar beliau. -FMT
Posted: 12 Oct 2012 08:27 PM PDT
Posted: 12 Oct 2012 08:22 PM PDT
မော်။ ။ဦးတို့ကော်မရှင်အနေနဲ့ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေဆောင်ရွက်နေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံတကာက တချို့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန် လျှောက်ပြောတာတွေရှိတယ်။ မဟုတ်တာတွေပြောတယ်လို့ စွပ်စွဲချင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သတင်အမှားတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီသတင်း အမှားတွေကို ပြန်ဖြေရှင်းနှိင်ဖို့အတွက် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ မှာပါတဲ့ ဆရာဦးဝံသရယ်ဦးကိုကိုကြီးရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်ပြန်ဖြေနေပါတယ်။ အဓိကတော့ နိုင်ငံခြားက တချို့တွေက မဟုတ်မမှန်လုပ်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က ဘယ်ဘက်ကမှ လိုက်ပြီးရှင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ ရပ်တည်ချက်အရငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ ဖြေရှင်းစေချင်တယ်။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမဖြေရှင်းစေချင်ဘူး။
မော်။ ။ ဒီမိုကရေစီသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ အဓိကရုဏ်းတြွေုဖစ်အောင် လှုံဆော်နေတဲ့သူတွေကို ဦးအနေနဲ့ဘာတွေ ပြောပြချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဆိုရှယ်ဟာမိုနီဖြစ်ဖို့အတွက် ကျင့်ဝတ်တွေက ခြောက်ခုရှိတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် အမြင်ပါ။ တခြားလူတွေကိုတော့ မပြောဘူး။ အခုလို social harmony မဖြစ်လို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာကော၊ ရခိုက်ပြည်နယ်မှာကော ပဋ္ဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေရတာပေါ့။ သူများဘာသာကိုလည်း မစော်ကားရဘူး။ သူများဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကိုလည်း မစော်ကားရဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ရာကိုလည်းမစော်ကားရဘူ။ အခုလိုဖြစ်အောင်သွေးထိုးမြှောက်ပင့်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကလည်း culture ethic ကိုချိုးဖောက်တာပဲ။ သည်လို လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာကဖြေရှင်းလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြီးလာဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ မဖြေရှင်းနှိင်ရင် ရခိုင်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ တစ်ချိန်လုံးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှာပဲ နေနေရတော့မှာ။သည်အတွက် နစ်နာစရာရှိရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ နစ်နာသလို အဲသည်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ လူမျိုးတွေလည်း နစ်နာမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟိုဘက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရတယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ စစ်သားတွေကကော သည်ခံမှာလား။ ပိုပြီးဖိနှိပ်တော့မှာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲပြဿနာက ပြီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ရအောင် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးနေလို့ စစ်တွေမှာ အခြေအနေလေး ကောင်းခါစရှိသေး ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ထပ်ထပ်ဖန်တီးကြတယ်။ ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာလုပ်တာဆိုတော့ တစ်ဖက်နိုင်ငံကလည်း အခုလို လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအချင်းချင်း၊ ဘာသာအချင်းချင်းဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်တာ။ ယဉ်ကျေးမှု ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးက သဟဇာတဖြစ်ဖို့အတွက် social harmony ကရမှာမဟုတ်ဘူး။ social harmony မရသမျှ ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ ကတည်ဆောက်လို့မရ။ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးနေတာကို နားမ၀င်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာသလို ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကျွန်တော်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ အလွတ်ပြောပြတာပါ။ အဲသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာလည်း ဝေဒနာအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပဒေအတိုင်း ဥပဒေချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့သူကို အရေးယူဖို့က နံပါတ်တစ် ဥပဒေက အကာအကွယ်ပေးရမယ်။ အခုလိုမဟုတ်ဘဲ ဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်မပေး ဘဲနဲ့ ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ လူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လိုက်ပိုက်ကြည့်လို့ မသင့်တော် ပါဘူး။ ဖြစ်စေချင်တာက ကချင်မှာစစ်ဖြစ်တယ်။ ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်တယ် ခံရတာကပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ အဲ့သည့်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်။ မတရားအမှုကျူးလွန်သူတွေကို ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူဖို့လုပ်နေတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်အရ အရေးယူမယ်။ အပြစ်လုပ်တဲ့သူကို ခြေရာခံမိပေမယ့် သူတို့က ပြေးနေတယ်။ ပြည်နယ်ထဲမှလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကိုသိနေပြီ မလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါ။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအပေါ်ကို သွားနေတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသွားရင် ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကြိုးစားလို့ရမယ်။ တပြိုင်နက်တည်းတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေတဲ့ကာလမှာ ပြဿနာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ တချို့ကိုယ်တိုင်လည်းမတွေ့ဘဲ ပြောတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်လိုနေရာမှာတော့ မဖြေရှင်းချင်တော့ပါဘူး။
မော်။ ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ကစပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး သိထားရပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာကလည်း သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကို သုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ သည်ကနေ တစ်ဆင့်ဝါဒဖြန့်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော်မရှင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ကော်မရှင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာ ဆက်တိုက်တင်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလဲ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ဆယ်မိနစ်တစ်ခါ ဆယ့်ငါးမိနပ်တစ်ခါ သတင်းတောက် လျှောက်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုကိုထိုင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကြောင့်လျှောက်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုကိုထိုင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကြောင့် နှောင့်နှေးနေရတာလည်းရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်အင်တာနက်မရှိတဲ့နေရာမှာ ဘာလို့ဒီကောင်မလေးပုံတက်တာလည်းဆိုပြီး စဉ်းစားနေတာ။ အဲ့သည်တင်တဲ့လင့်ခ်ကို မီခါနီးကြမှ အလယ် ကလူက ထွက်ပြေးတော့ ဘာမှအရေးမယူနိုင်သေးဘူး။ နောက်ပြီး ဆိုက်ဘာအတက်ခ်က ပြန်ခုခံနိုင်တဲ့ အင်အားမှာ နည်းပညာက သည်နိုင်ငံက အားနည်းနေတယ်။ နောက်တစ်ခုက သတင်းတင်နိုင်ဖို့အတွက် ရေးသားပုံကလည်း အရေးကြီးတယ် ဒါနဲ့ပက်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို နိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့ facility မှာ အားနည်းတယ်။ ဒါကတော့ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်ကဒီလိုပါဆိုပြီး ချက်ချင်းပြန်ကြားနိုင်ဖို့ကလည်း လိုတယ် တစ်ချို့က အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိတဲ့သူတွေကလည်း တစ်ပုံ ကြီး အမှားလုပ်တဲ့ သူတို့ကို ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့တော့မရှိဘူး။ ပြန်ကာကွယ်ဖို့ဘဲရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရခိုင်မှာ ဈေးရောင်းတဲ့ကောင်လေးရဲ့ သတင်းအမှားတွေ ထွက်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်က သည်ကောင်လေးရဲ့ အဖြစ်ကအခုလိုမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုသူ့အမေနဲ့ပြန်တွေ့နေပြီဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်မှာပြန်ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က official မထွက်သေးပေမယ့် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာ ဖော်ပြနေပါ တယ်။
မော်။ ။ တခြားဖြည့်စွက်ပြောကြားချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါ။
ဖြေ။ ။ တစ်ဘက်နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် သည်မှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကိုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံရုံးရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတော့ မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့။ ဆန္ဒဘဲထုတ်ဖော်ကြပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လေးစားမှုတစ်ခု အနေနဲ့ပေးစေချင်တယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို နည်းနည်းထိန်းပေးကြပါ။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတိုင်း ဆူဆူပူပူဖြေရှင်းမယ့်အစား ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းကြပါ။ မီးလောင်တာကိုတွေ့တယ်။ အဲ့ဒါကိုရေနဲ့ပက်ဖြန်း ရင်ငြိမ်းပါတယ်။ ရေအေးနဲ့ငြှိမ်းလည်း ငြိမ်းသလို ရေနွေးနဲ့ဆိုလည်းငြိမ်းတယ်။ ဒါကိုဘာလို့ ရေနွေးနဲ့ပက်ချင် တာလဲ၊ ရေနွေးနဲ့ပက်တော့ ကိုင်တဲ့သူလည်းပူပါတယ်။ ဖြေရှင်းပေးနေတာကို လက်ခံပေးပါ။ မြှောက်ပေးနေတဲ့ နှစ်ဖက်လုံးကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဆက်လုပ်နေရင်တော့သမ္မတကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့ကော်မရှင် အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့် လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်။ ဒါ့အပြင် ရခိုင်ကိစ္စကို ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ဘဲ နေရာစုံဒေသစုံမှာ ကျွန်တော်တို့ကိစ္စလို့ သတ်မှတ်ပေးစေချင်တယ်။
မော်။ ။ အခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Posted: 12 Oct 2012 06:59 PM PDT
To the opposition media, read this carefully.
It was Soros who wanted to see PM Najib in New York two years ago, and not the other way round as you people had spun!
The Umno president said he had met Soros in New York on the request of the currency trader.
He added that there was nothing wrong with the meeting, pointing out that Dr Mahathir had also previously done the same thing.
"Yes, I met with Soros. It was only to fulfil his request," Najib told reporters tonight after chairingaBarisan Nasional (BN) supreme council meeting.
The Umno president declined, however, to reveal details of the meeting.
"It is notaproblem meeting with Soros. As long as it is not done with the intention of bringing down the government and it was not about getting any financial aid, I don't think there is anything wrong with that," he said.
Yes, nothing's wrong with that. So many people had met that currency manipulator, including former premier Tun Dr Mahathir. In fact, when Soros wanted to haveameeting with Najib, it implied how much he recognised Malaysia and the way its being managed.
Najib didn't ask for any financial aid from Soros, unlike the Malaysian opposition and some of its NGOs and media like Suaram and Mkini.
Just look at how Mkini spun the meeting, turning it intoa'political crime' when putting the country's interest under their feet seems alright to them!
Mkini and the opposition should be ashamed of themselves for politicising the issue... or could it be to cover their fundings from George Soros? Writer Steven Gan got no bullet in his gun for the kill but made himself and Mkiniabunch of fool, losing credibility for trying to spin it out of context.
Dr Mahathir wrote in Sunday Times:
"So why is Soros financing Malaysiakini,aMalaysian NGO?
"Obviously, it is in order to achieve regime change, to put his nominees as prime minister and ministers in the Malaysian government."
"My view is of Soros is that he is stillarouge currency trader and he compounds this evil by using the money to put his kind of people to rule the countries targeted by him.
"And Malaysia is obviously one of his targets...
The opposition is good at shooting at others asamean to cover their own mistakes. What Mkini, Malaysia Chronicle and others did was to avert attention on their Soros fund, thus finding Najib-Soros meeting asashield to defend themselves.
Unfortunately, it ended up with them shooting at their own feet!
Posted: 12 Oct 2012 07:02 PM PDT
Tun Dr Mahathir Mohamad dan Najib Razak hipokrit menyalak kononnya George Soros musuh yang cuba memporak-perandakan negara dan mengaitkan spekulator mata wang itu dengan Pembangkang, tetapi dalam masa sama bertemu untuk meminta bantuan, kata Datuk Saifuddin Nasution Ismail.
"Sekarang sudah terdedah topeng kedua-dua mereka. Di satu sisi mereka memainkan sentimen kononnya Soros musuh luar yang cuba huru harakan negara.
"Dalam masa sama mereka sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan Soros yang turut dijalin bersama pemimpin Umno lain.
"Kemudian dia tuduh kita (Pakatan Rakyat) pula. Sedangkan Najib dan Soros secara sembunyi-sembunyi bertemu," kata Setiausaha Agung KEADILAN itu ketika dihubungi.
Ahli Parlimen Subang, Sivarasa Rasiah minggu lalu mendedahkan pertemuan antara Perdana Menteri dengan Soros di sebuah hotel mewah, Hotel Plaza di Manhattan, New York 27 September 2010.
Saifuddin turut menempelak pertemuan pemimpin Umno dengan agen Yahudi.
"Dalam episod boneka asing, Dr Mahathir sendiri membayar jutaan ringgit kepada pelobi Yahudi, Jack Abramoff hanya untuk bertemu Presiden Amerika.
"Terbaru Dr Mahathir mengatakan Soros akan melantik Perdana Menteri boneka, walhal beliau sendiri pernah menulis tiga pucuk surat kepada tiga Perdana Menteri Israel yang berbeza," katanya.
"Beberapa tahun sebelum itu, Menteri Luar, (ketika itu) Datuk Seri Syed Hamid Albar turut bertemu David Levy (Menteri Luar Israel)," kata Saifuddin.
Perkara itu merujuk pertemuan kedua-dua pemimpin itu pada Ogos 1999 semasa Perhimpunan Agung Tahunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNGA) bagi membincangkan pungutan dana untuk Umno dalam persediaannya menghadapi pilihan raya umum ke-10.
"Pendedahan terbaru ini akan menyebabkan rakyat lebih kenal wajah pemimpin Umno yang bermuka-muka," tegas Ahli Parlimen Machang itu lagi.
Sementara itu, Naib Presiden, Tian Chua mendedahkan pertemuan sulit tersebut adalah untuk meyakinkan Soros bahawa Najib seorang yang mengambil pendekatan sederhana dalam pentadbiran.
"Kononnya negara (Malaysia) diancam kumpulan ekstrim dan (Najib) nak dapatkan sokongan (Soros). Adakah Utusan (Malaysia) dan media arus perdana diberitahu? Kemudian beranikah media ini menyerang mereka?" soal Tian.
"Mereka serang orang lain kononnya pengkhianat. Mereka menuduh orang lain tanpa asas. Sedangkan Dr Mahathir dan Najib menipu untuk mengekalkan kuasa," tegas Ahli Parlimen Batu itu.
Najib: 'Memang saya ada jumpa Soros'
Sambil berkata ia adalah kunjung hormat biasa antara dua pihak, Najib yang juga Pengerusi BN berkata, "tak perlu dibimbangi.
" "Tidak ada isu untuk menjatuhkan kerajaan. Tak bincang pun untuk dapat kewangan. Tak ada niat jahat.
"Beliau (Soros) mahu jumpa saya. Hakikatnya, selepas Tun Mahathir datang terlebih dahulu untuk jumpa dengan dia," kata beliau yang juga Menteri Kewangan.
Beberapa pihak mendakwa Najib dan Dr Mahathir pernah mengadakan pertemuan dengan Soros.
Sehubungan itu mereka meminta agar Najib memberi penjelasan segera di sebalik laporan media bahawa beberapa pihak menerima dana daripada institusi milik jutawan tersebut. -SH
Demikian hukum kebenaran dan keadilan berjalan. Terdedah tembelang pemimpin-pemimpin UMNO. Menunjuk jarinya ke arah Pakatan Rakyat ada hubungan dengan Soros sedangkan mereka tidak menyedari empat jari yang lainnya menunjuk ke arah mereka sendiri.
Itulah yang dinamakan hipokrit yang tak terkata dasyatnya!
UMNO tetap binasa. Hanya menunggu detik dan ketikanya!
Posted: 12 Oct 2012 03:30 PM PDT
Thanks to reader YK who sent me the following Inspirational Video some time ago. I never watched it until recently. It isavery simple and yet beautiful video withalesson or two for everyone of us!!
What are we complaining about when we have life and everything? Listen to EVERY word this 15-year old girl says and learn how she imparts life lessons to us.
I was skeptical at first but when watching the video, I could really feel and see that Aisha Chaudhury meant every word she said.
I am not joking when I say that I shed tears when I watched this refreshing video that gave me more oomph and zest for life like no other has ever given me.
"There's always something in life to sing about...something to be grateful for...even for the challenges life has thrown at us because they let us experience life atamuch greater intensity than we would have otherwise...
And our souls would have no rainbows if our eyes had no tears....(paraphrased from Aisha's speech)
This INK video is about:
Fifteen year-old Aisha Chaudhary was born with an immune deficiency disorder and overcameapredicted life expectancy of only one year to have become an accomplished artist today. Despiteaserious lung disease called Pulmonary Fibrosis, her persistent optimism, extraordinary maturity in the face of impossible odds, and calm perspective on life's challenges have been an inspiration to many.
Like Voltaire, she believesashipwreck gives us an opportunity to sing in the life boats. Little Aisha Chaudhary, the first INK Youth Fellow, teaches usabig lesson even as she is battlingalife-threatening medical condition. All of 15, Aisha has taught herself to paint, take pictures, run with her dog and dance at her cousin's wedding, not just once but twice. Aisha learned art at the American Embassy School. "You live every moment twice, once in your mind and once when you actually live it," she said toastanding ovation.
CLICK HERE to watch the video on SINGING IN THE LIFE BOAT.
* INKtalks are personal narratives that get straight to the heart of issues in 18 minutes or less. They are committed to capturing and sharing breakthrough ideas, inspiring stories and surprising perspectives--for free!